CHANGHENG TECHNOLODY ibhizinisi elisezingeni eliphezulu eShanghai, lidlule uhlelo lokunikezwa isitifiketi se-ISO / TS16949. Ifektri ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-8000, enabasebenzi abangaphezu kuka-200, futhi inzuzo engenayo yonyaka icishe ibe yizigidi ezingama-400 RMB.
I-SHANGHAI CORBITION MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD, eyasungulwa ngonyaka we-2020, egxile kuzinto zokusebenza nezinsimbi, iyinkampani ezimele yebhizinisi engaphansi kobuchwepheshe beChangheng.
Inamalungelo obunikazi angaphezu kuka-30 wokusungula nokusetshenziswa kwemodeli, kufaka phakathi amalungelo obunikazi angaphezu kwayishumi emikhiqizo yedivayisi yezokwelapha
Eminyakeni edlule, usevele unikeze izixazululo zohlelo ezingaphezu kwezingu-100 ekwakhiweni komkhiqizo, ekukhiqizeni nakwabanye kumakhasimende asembonini yasekhaya nakwamanye amazwe.
Le nkampani inamakhasimende omkhiqizo amaningi adumile emhlabeni afana ne: ZYbio, Sansure Biotech, Daan-gene, Shanghai PHARMA njalonjalo
Ngonyaka we-2019, wasebenza nabasebenzi beBGI ukusiza iMorocco ekulweni ne-COVID. Kuyo yonke iminyaka yemizamo, inkampani izuze ukuthembela nokudumisa kwamakhasimende.
Ngobuchwepheshe bokuxilonga obungamangqamuzana njengengqikithi, i-CORBITION ibhizinisi lobuchwepheshe bezokwelapha elihlinzeka ngezixazululo ezigcwele zokuhlanganisa insimbi yokukhipha i-nyukliya, ithuluzi le-fluorescence elilinganiselwe le-PCR, umtshina ophathekayo, ama-reagents wokuxilonga, okudliwayo okuphathelene nezinto eziphilayo.
Imikhiqizo yezokwelapha yenziwa, yahlolwa futhi yahlanganiswa ezindaweni zokusebenzela ezihlanzekile, ezingenazintuli.
Le nkampani itholakala eDongjing Industrial Park, indawo esemqoka yeG60 Kechuang Corridor, iSongjiang District, eShanghai, eduzane naseDongjing Station yeMetro Line 9.
Izinsimbi Zokwelapha zidlulise isitifiketi sokuhlolwa kokuphepha kwamazwe omhlaba / kwasekhaya kanye nesitifiketi se-CE, i-prodcution liscense ibeke kabusha ku-reacord ye-State Food and Drug Administration. Le nkampani iphinde yadlulisa uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi yezokwelapha i-ISO13845.
Ukuqamba okugxile kubantu, isayensi nobuchwepheshe.
Ukunakekelwa kwezempilo, intuthuko esimeme.